Mwari Ndiye Shamwari Yakanakisisa Yaunogona Kuva Nayo
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Bicol Blackfoot Boulou Cambodian Carib Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Douala Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Frafra French Futuna (East) Ga Garifuna Georgian Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kisi Korean Krio Kwanyama Laotian Latvian Lhukonzo Lithuanian Luganda Luo Malagasy Mam Mapudungun Mauritian Creole Mbunda Medumba Mizo Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNorway Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuThailand Nahuatl (Guerrero) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nengone Nepali Nias Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Romany (Northern Greece) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Sarnami Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Shuar Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Wallisian Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kuva shamwari yaMwari ndicho chinhu chakanakisisa chingagona kuitika kwauri. Mwari achakudzidzisa kuti ungava sei anofara neakachengeteka; iye achakusunungura pazvitendero zvakawanda zvisina kururama nemiitiro inokuvadza. Achateerera minyengetero yako. Achakubatsira kuti uve norugare mumwoyo nechivimbo. (Pisarema 71:5; 73:28) Mwari achakutsigira munguva dzenhamo. (Pisarema 18:18) Uye Mwari anokupa chipo chake choupenyu husingaperi.—VaRoma 6:23.
Sezvaunoswedera pedyo naMwari, uchaswederawo pedyo neshamwari dzaMwari. Dzichavawo shamwari dzako. Chaizvoizvo, dzichava savakoma navanun’una kwauri. Dzichafara kukudzidzisa nezvaMwari uye dzichakubatsira nokukukurudzira.
Hatina kuenzana naMwari. Sezvaunotsvaka ushamwari naMwari, unofanira kunzwisisa chinhu chinokosha. Ushamwari naMwari hahusi ushamwari hwavakaenzana. Iye mukuru uye akachenjera zvikuru uye ane simba zvikuru kutipfuura. Ndiye Mutongi wedu akakodzera. Saka kana tichida kuva shamwari yake, tinofanira kumuteerera nokuita zvaanotiudza kuti tiite. Izvi zvichatinakira nguva dzose.—Isaya 48:18.
zvikuru kutipfuura. Ndiye Mutongi wedu akakodzera. Saka kana tichida kuva shamwari yake, tinofanira kumuteerera nokuita zvaanotiudza kuti tiite. Izvi zvichatinakira nguva dzose.—Isaya 48:18.